whitecolor၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မိန်းကလေးyangonMyanmar Like2members like this
ဘလော့များ (60)ဆွေးနွေးချက်များ (11)အဖွဲ့များ (5)ဓါတ်ပုံများ (1)Photo Albums (1)ဗွီဒီယိုများ whitecolor's Likes Whitecolor's ၏မိတ်ဆွေများ
ဒီဘလော့ကို May 19, 2013 တွင်8:54pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments
“လောကဓံမုန်တိုင်းများနှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား” တဲ့။ လောကမှာလူတွေ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ လောကဓံဟာ မုန်တိုင်းလိုပြင်းထန်တယ် မုန်တိုင်းလိုပြင်းထန်နေတဲ့ လောကဓံနဲ့ ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာ ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ထား မရှိဘူးဆိုရင် ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားက လောကသဘာဝကို ရှစ်မျိုးခွဲပြီး လောကဓမ္မသုတ် မှာ ဟောထားတာ။ ဒါ မြန်မာ ပရိသတ်တွေ လောကဓံ ရှစ်မျိုး ဆိုတာကိုတော့ လူတိုင်းသိကြတယ်။
မြတ်စွာဘုရားက-“လောကဓမ္မာ လောကံအနုပရိဝတ္တ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... တကယ့် ဥပေက္ခာဆိုတာ
ဒီဘလော့ကို April 28, 2013 တွင်11:17pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 10 Comments
ဥပေက္ခာရဲ့ သဘောတရားကို မြန်မာလူမျိုးတွေကအဓိပ္ပါယ်ကောက် လွဲနေတယ်။ မခေါ် မပြော၊ ဂရုမစိုက်ဘဲနေတာကိုဥပေက္ခာလို့ထင်နေကြတယ်။ အမှန်မှာ ဥပေက္ခာက မေတ္တာထက်လည်း သာတယ်၊ကရုဏာထက်လည်း သာတယ်။ ဥပေက္ခာဆိုတဲ့သဘောတရားကလူဆိုတာ သူ့ ကံနဲ့ သူဖြစ်တာ။ဆဲသွားရင်
လည်း ငါ့ဆဲရမလားလို့ စိတ်မဆိုးနဲ့ ။
ဥပေက္ခာသမားသည် လာရောက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းပြီးတော့ အကူအညီပေးရင်လည်း အော် ဒီကောင်က တော်တယ်၊ ငါ့ကို ချီးမွမ်းဖော်ရတယ်၊ ငါ့ကို ကူညီဖော်ရတယ် ဆိုပြီးတော့လည်း ၀မ်းမသာဘူး၊ ဆိုလိုတာက… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ဓမ္မယတြာ (တနည်း) ကံကောင်းအောင်ပြုလုပ်နည်း
ဒီဘလော့ကို April 28, 2013 တွင်9:04am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
လောကလူသားတို့သည် မိမိတို့ဘ၀တွင် အလိုမရှိ၊ မမြတ်နိုး၊ မနှစ်သက်၊ မတောင့်တ အပ်သော ဘေးဆိုး၊ ကပ်ဆိုး၊ အန္တရာယ်ဆိုး၊ ရောဂါဆိုးအမျိုးမျိုးတို့နှင့် ကြုံတွေ့လာရသောအခါ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်ကြရ၏။ ယူကြုံးမရ ဖြစ်ကြရ၏။ ဆောက်တည်ရာမရ ငိုကြွေးကြရ၏။ စိုးရိမ်ပူဆွေးကြရ၏။ ဘာလုပ်၍ ဘာကိုင်ရမှန်းမသိအောင် ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်တတ်ကြ၏။ ဤသို့ဆင်းရဲဒုက္ခ တွေ့ကြုံရ၍ မိမိကိုယ်တိုင် ကံနိမ့်နေခြင်းကို သိကားသိ၏။ သို့သော် ထိုနိမ့်နေသောကံကို မြင့်လာအောင် မည်သို့သောနည်းလမ်းဖြင့် ပြုလုပ်ရမည်ကို မသိ။ ကျော်လွှားရမည်ကို နားမလည်။… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ (သို့) အယူမှားခြင်း
ဒီဘလော့ကို April 27, 2013 တွင်5:56pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။3Comments
ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှုထောင့်ကကြည့်ရင် အခြားအခြား ဘာသာအယူဝါဒတွေဟာ လွဲမှားနေတဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အခြားဘာသာတွေရဲ့ ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်လည်း သူတို့က ဗုဒ္ဓဘာသာကို မှားယွင်းတဲ့ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ ပြောကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကတော့ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ် ကိုယ့်အယူဝါဒသာ အမှန်လို့ ပြောကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့လည်း မှားမှန်းသိသိနဲ့ပဲ အယူဝါဒတစ်ခုကို ဇွတ်မှိတ်ပြီး လက်ခံနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဘုရားရှင်လက်ထက် ဘုရားနဲ့ ခေတ်ပြိုင် ပေါ်ထွက်ခဲ့ကြတဲ့ တိတ္တိဆရာကြီးတွေမှာ သူ့ပရိတ်သတ်နဲ့သူ ရှိနေကြတာ… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဒီနေရာမှ ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ရန်...
အားလုံးကြည့်ရန်... whitecolor's Groups
Thaung Tan liked whitecolor's blog post 'လောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား'Sundayမြူနှင်းမှုံ liked whitecolor's blog post 'လောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား'Sundayzawmintun commented on whitecolor's blog post 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆိုသည်မှာ'"ကျေးဇှုးပါ အရမ်းကောင်းပါတယ်"Sundayzawmintun liked whitecolor's blog post 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဆိုသည်မှာ'Sundayမောင်အေးချမ်း commented on whitecolor's blog post 'လောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား'"ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တရားတော့နာဖူးတယ်အစ်မရဲ့..ဒီလိုတော့ မဖတ်ဖူးသေးဘူး..ပိုပြီးတော့ ရှင်းသွားတာပေါ့.မျှဝေပေးတဲ့အတွက်.ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ.."Sunday၄၄၂ဇော်နိုင် commented on whitecolor's blog post 'လောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား'"ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်ဗျာ"Sundayကလေးတို.ဆရာမ commented on whitecolor's blog post 'လောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား'"ကောင်းလိုက်တဲ့ ဒဿနလေးတွေကါယ်-- ကျေးဇူးတင်တယ်နော်-
အားလုံးရွှင်လန်းချမ်းမြ့ကြပါစေ"Sundaywhitecolor postedablog postလောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထားလောကဓံမုန်တိုင်းများ နှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား“လောကဓံမုန်တိုင်းများနှင့် ကြံ့ခိုင်သည့်စိတ်ထား” တဲ့။ လောကမှာလူတွေ တွေ့ကြုံနေရတဲ့ လောကဓံဟာ မုန်တိုင်းလိုပြင်းထန်တယ် မုန်တိုင်းလိုပြင်းထန်နေတဲ့ လောကဓံနဲ့ ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာ ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ထား မရှိဘူးဆိုရင် ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်။လောကဓံ (၈)မျိုးမြတ်စွာဘုရားက လောကသဘာဝကို ရှစ်မျိုးခွဲပြီး လောကဓမ္မသုတ် မှာ ဟောထားတာ။ ဒါ မြန်မာ ပရိသတ်တွေ လောကဓံ ရှစ်မျိုး ဆိုတာကိုတော့ လူတိုင်းသိကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားက-“လောကဓမ္မာ လောကံအနုပရိဝတ္တ န္တိ” ဟောဒီလောကရဲ့ သဘာဝတရားတွေက…See MoreSunday 3
whitecolor and အရှင်ပဏ္ဍိတ(ဒေါင်းဖြူ) are now friendsSundaywhitecolor commented on မောင်အေးချမ်း's blog post '** ပုရိသတို့အတွက် သတိပြုဖွယ် မြွေအန္တရာယ် **'"ဖတ်မှတ်သွားပါတယ်။မောင်လေးရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း လေးစားမိပါတယ်ရှင်။ ကိလေသာ ကာမဂုဏ်တောမှာ ကျင်လည်လျက်ရှိနေသမျှ ပုရိသ(ယောက်ျား) ရယ် ဣတ္ထိယ(မိန်းမ) ရယ်မဟုတ်ပါဘူး၊ မိမိစိတ်အစဉ်ကို သတိ ဆိုတဲ့ညဏ် မဆင်ခြင် ၊ မထိမ်းချူပ်ပဲ လွှတ်ခြင်တိုင်းသာ လွှတ်ထားမယ်ဆိုပါက သံသရာ…"May 12whitecolor commented on dimplemit's blog post 'လူတွေဆယ်လို့ လမ်းပျောက်မှာ စိုးပါဘိ..'"ညီမလေးရေ ဖတ်မှတ်သွားတယ်နော်။ ဟုတ်တယ်ညီမလေးရေ လူတော်တော်များများဟာအဆိုးလောကဓံကို ဂရုပြုမိပေမဲ့၊ အကောင်းလောကဓံကို ကျတော့ မေ့လျှော့ပြီး သာယာမှူ့ တွေ ကျေနပ်နေကြတယ်နော်။"May 11whitecolor liked dimplemit's blog post 'လူတွေဆယ်လို့ လမ်းပျောက်မှာ စိုးပါဘိ..'May 11whitecolor liked အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'ဘာသာခြားတစ်ဦးနှင့် ဆုံတွေ့ခဲ့ရာဝယ်'May 10KO KO liked whitecolor's blog post 'ဗုဒ္ဓ၏ တနေ့တာဘ၀'May 9whitecolor liked အရှင်ဝဏ္ဏ's blog post 'ခွင့်လွှတ်တယ် ဆိုတာ'May 5whitecolor leftacomment for smileworld08@gmail.com"ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊
(…"May5More... RSS
2:00am အချိန်April 26, 2013, တွင်Tun Tun Win မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာလည်သွားပါတယ်တရားရေအေးအတူသောက်သုံးကြ
တာပေါ့ကျန်တော်ကစာဖတ်ဝါသနာပါတယ် 8:14pm အချိန်April 22, 2013, တွင်ရွှေရခိုင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မမ နေကောင်းတယ်နော်။ ကျွန်တော့ home page မှာ dhamma song တစ်ပုဒ် လောက်တင်ပေးပါဗျာ 11:54pm အချိန်April 8, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ ကျန်းမာပျော်ရွှင် စိတ်ကြည်လင်စွာဖြင့် သာသနာ့အကျိုး ရွက်သယ်ပိုးနိုင်ပါစေသော် …။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:317977 1:37am အချိန်April 6, 2013, တွင်ပိန်ဖောင်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အမရေ လာလည်သွားတယ်နော်... မေတ္တာပို့လေးပါ အပိုနာယူသွားပါတယ် 12:11am အချိန်April 2, 2013, တွင်၄၄၂ဇော်နိုင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ နေ့ရက်တိုင်း ကိုပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗျာ 11:38pm အချိန်March 26, 2013, တွင်zaw lin naing မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မင်္ဂလာပါ အေးချမ်းပါစေ အဖြူေ၇ာင်လေး 5:45pm အချိန်March 26, 2013, တွင်ကုမုဒြာအရှင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အိုအမေရယ် မေ့ရင်ထဲက ထွက်ခွါခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလကို
ကျေနပ်ပါရစေအမေ.............။ 2:47pm အချိန်March 26, 2013, တွင်ကသစ် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ မရောက်တာကြာလို့လာလည်သွားပါတယ်ရှင့်။ 7:44pm အချိန်March 22, 2013, တွင်၄၄၂ဇော်နိုင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာရောက်လည်ပတ်သွားပါတယ်ဗျာ အရာရာအဆင်ပြေပါစေဗျာ 11:57pm အချိန်March 11, 2013, တွင်thhtike မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လာလည်ပါတယ် မှတ်ချက်ရေးသားတဲ့သူလုံးဝမရှိသေးပါ။
Top News · Everything ♫ ♥ မှုံနံ.သာဖြူ ♥♫ liked dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'11 minutes agomoh moh liked dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'14 minutes agoNilar Htet Htet Aung commented on dimplemit's blog post 'ဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....'"Thanks for sharing. I agree your thinking of the most important thing in life. I'll try my…"22 minutes agodimplemit posted blog postsဘ၀မှာ ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ....အတိတ်မှသမထနှင့်ဝိပဿနာအထုံတို့ပစ္စုပ္ပန်တွင်အကျိုးပေးပုံ1 hour agoashinvishittathara commented on နီစံ (အနီ)'s group 'အဘိဓမ္မာ ဌာန'"ဒီနေရာကိုလာလည်ခွင့်ရလို့အရမ်းဝမ်းသာပါတယ်"1 hour agoashinvishittathara joined နီစံ (အနီ)'s groupအဘိဓမ္မာ ဌာန-အဘိဓမ္မာ သင်ယူလေ့လာရန် -အဘိဓမ္မာ ရေးရာ ဆွေးနွေးနှီးနှောဖလှယ်ရန်See More1 hour ago 19
kham liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း'1 hour agoမတင်တင်မိုး commented on မူကြိုဆရာ's blog post 'ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်သင့် အချက်များ'"Thanks..."1 hour agoHtain Lin Oo liked မူကြိုဆရာ's blog post 'ပဋိစ္စ သမုပ္ပါဒ် ဒေသနာဆိုသည်မှာ'2 hours agoကောင်းမြတ်ဇော် commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း'"စင်္ကာပူမှ အလှူရှင်တဦးမှ စင်္ကာပူဒေါ်လာ $၅၀ လက်ခံ ၇ရှိပါသည်။ ယခုလို စေတနာသုံးတန် ပြဠာန်းကာ လှူဒါန်းမူ…"3 hours agoလှိုင်ကျော်ထွေး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း'"အလှူရှင် မနန်းယုမှ လှူဒါန်းငွေကျပ်-၂၀၀၀၀/-(ကျပ် နှစ်သောင်းတိတိ) ကို လက်ခံရရှိပါတယ် ခင်ဗျာ..။ယခုလို…"4 hours agoနန်းယု liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း'4 hours ago More... RSS